इरानको पर्यटन मन्त्री माननीय को हुन्? Seyed Ezatullah Zarghami
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » ईरान ब्रेकिंग न्यूज » इरानको पर्यटन मन्त्री माननीय को हुन्? Seyed Ezatullah Zarghami
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • संस्कृति • सरकारी समाचार • मानव अधिकार • ईरान ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • मान्छे • पुनर्निर्माण • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा
Ezzatollah Zarghami, मन्त्री ईरान सौजन्य: Khamenei.ir -
इरानका नयाँ राष्ट्रपतिले माननीय नियुक्त गरेका छन्। सैयद इजतुल्लाह जरघमी सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन मन्त्री बनेका छन्। उनी २००४ देखि २०१४ सम्म इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान ब्रॉडकास्टि headको प्रमुखको रूपमा पद सम्हाल्नुअघि संस्कृति र इस्लामिक मन्त्रालयका साथै रक्षा मन्त्रालयका उपमन्त्री थिए।
इब्राहिम रायसी, इस्लामिक गणतन्त्र ईरान को नयाँ राष्ट्रपति अगस्त on मा आफ्नो मन्त्रिपरिषद नियुक्त संसदले नियुक्त सबै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु लाई अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
ईरानको सांस्कृतिक विरासत र पर्यटन मन्त्रालय मा माननीय हुनेछ। सैयद इजतुल्लाह जरघमी नयाँ मन्त्री नियुक्त
२०१ In मा इरानमा लगभग million मिलियन विदेशी आगन्तुकहरु थिए।
ईरान संसारको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताहरु मध्ये एक हो र शुरू बाट नै संसारको सबैभन्दा विचारशील र जटिल सभ्यताहरु को बीचमा रहेको छ। त्यहाँ ईरानी सभ्यता को पहलुहरु छन् कि, एक तरीकाले वा अर्को मा, ग्रह मा लगभग हरेक मानव लाई छुईएको छ। तर त्यो कसरी भयो, र ती प्रभावहरुको पूर्ण महत्व को कहानी, अक्सर अज्ञात र बिर्सिएको छ।
ईरान पर्यटन र पर्यटन संगठन ईरान को यात्रा भन्दै ईरान को पर्यटन को वर्णन गर्दछ। फारस, यसको समृद्ध र रंगीन इतिहास, अनगिन्ती स्मारकहरु, ईरानी आतिथ्य र स्वादिष्ट खाना संग चार मौसम को भूमि।
Tहाम्रोवाद in इरान विविध छ, पर्वतारोहण र Alborz र Zagros पर्वतहरु मा स्कीइ from बाट गतिविधिहरु को एक श्रृंखला प्रदान, फारसी खाडी बाट समुद्र तट बिदाहरु लाई।
इरान कोभिड -१ by बाट धेरै प्रभावित भएको छ र यसैले यसको यात्रा र पर्यटन उद्योग पनि छ।
इरानको पर्यटन उद्योगले कोरोनाभाइरस महामारीको प्रकोप पछि लगभग ३२० ट्रिलियन रियाल (४२,००० रियाल प्रति डलर को आधिकारिक विनिमय दरमा 320. billion बिलियन डलर) को घाटा बेहोर्नु परेको छ, ISNA ले मंगलबार रिपोर्ट गरेको छ।
महामारीले देशको एक पटकको उदीयमान पर्यटन क्षेत्रमा ४४,००० भन्दा बढी रोजगारीलाई पनि बर्बाद गरेको छ, रिपोर्टले थपे।
इरानमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप र त्यसपछिको बेरोजगारी र आर्थिक नोक्सानीको परिणामस्वरूप, आवास केन्द्रहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भए। यी तथ्या्कहरु फेब्रुअरी २०२० र २०२१ को वसन्त को बीच अवधि कभर।
आवास केन्द्रहरूले भाइरसबाट २ 280० ट्रिलियन रियाल ($ 6.6. billion बिलियन डलर) हिट लिएका छन्, जबकि यी केन्द्रहरुमा २१,००० भन्दा बढी कामदारहरुले उल्लेखित समयमा आफ्नो जागिर गुमाएका छन्।
पर्यटन एजेन्सीहरु पर्यटन उद्योग मा दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित समूह भएको छ, १० ट्रिलियन रियाल (२३10 मिलियन डलर) को क्षति र प्रकोप पछि ,238,००० भन्दा बढी बेरोजगारहरु संग।
रोजगारी र आर्थिक नोक्सानी को संदर्भ मा, पर्यटन परिसरहरु, इको-लज, र टूर गाइडहरु पनि पर्यटन उद्योग मा सबैभन्दा प्रभावित समूहहरु मध्ये एक हुन्।
को हो उहाँ माननीय Sayyid Ezzatollah Zargham, इरान को इस्लामी गणतन्त्र को लागी पर्यटन मन्त्री?